बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘लुट २’ प्रदर्शनमा, हलमा दर्शकको ठुलो भिड | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - Feb 24, 2017
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘लुट २’ प्रदर्शनमा, हलमा दर्शकको ठुलो भिड
फिल्म ‘लुट २’ आज सुक्रबारबाट देशभरका एक सय बढी हलहरुबाट प्रदर्शनमा आएको छ । सर्वाधिक हल संख्या पाएको यो बहुप्रतिक्षित फिल्मले क्यएफएक्स अन्र्तगतका मल्टीप्लेक्स हलहरुमा मात्रै २२ शो पाएको छ । आज को सबै सो बुक्ड भै सकेको छ । देशै भरका सिनेमा घर हरुमा बिहानै देखि दर्सकहरुको ठुलो भिड लागेको छ । निश्चल बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘लुट २’ ले हल र शोज संख्या सार्वधिक पाएको छ । क्यएफएक्समा ‘लुट २’ को अग्रिम बुकिङका लागि खोलिएका टिकट शुक्रबार र शनिबार लागि सबै बुक भैसकेका छन् ।
यो नेपाली फिल्म क्षेत्रको इतिहासमा पहिलो खुसीको खबर हो । झण्डै पाँच वर्ष अघि प्रदर्शनमा आएको ब्लकबस्टर फिल्म ‘लुट’ को सिक्वेल ‘लुट २’ हो । सिक्वेलमा निर्देशक, निर्माण र कलाकार दोहोरिएका छन् । माधव वाग्ले र नरेन्द्र महर्जनको संयुत्त निर्माण रहेको फिल्ममा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, ऋचा शर्मा, सृजना सुब्बा, कर्म, सुशिल पाण्डे, प्रतिकराज न्यौपाने, विपिन कार्की लगायतको अभिनय रहेको छ ।
लुट २ युनिटसँग गरेको रमाईलो कुराकानी
Tags:Dayahang Rai, madhav wagale, Nischal Basnet, Reecha Sharma, saugat malla
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘लुट २’ प्रदर्शनमा, हलमा दर्शकको ठुलो भिड0out of5based on0ratings.0user reviews.
चलचित्र ‘मेरी कुसुम’को अडियो र ट्रेलर सार्वजनिक
सुक्रबार ‘लुट २’ को डेढ करोड बढी कलेक्सन
Nepal	Oct 10, 2017
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – कार्तिक १७ गते रिलिज हुने सिनेमा ’फाटेको जुत्ता’ले पब्लिसिटीको नयाँ…
Nepal	Oct 6, 2017
राजधानी बाहिर ‘मेरो पैसा खोई ?’
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । असोज ११ मा राजधानीका केहि हलमा प्रदर्शन भएको सिनेमा ‘मेरो…
Nepal	Oct 4, 2017
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । कार्तिक १७ गते रिलिज हुने सिनेमा ‘फाटेको जुत्ता’को लोकप्रियता दिनप्रतिदिन…